Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » A Doer, Andrew Wood, Filohan'ny SKAL ASIA vaovao
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Thailand • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
SKAL dia tsy afaka nifidy mpitondra tsara kokoa hitarika ny SKAL Asia sy ny mpikambana ao aminy nandritra ny dingana farany tamin'ny krizy COVID-19. Andrew Wood dia manana izay ilaina.
"Ny iray aminay izao dia filohan'ny SKAL Asia", hoy izy eTurboNews Juergen Steinmetz, mpanonta. Andrew dia efa mandray anjara amin'ny publication tahaka ny fifanarahanay tany Thailand nandritra ny taona maro.
Nandritra ny AGM virtoaly an'ny Skål International Asia izay natao ny fiandohan'ny andro androany dia natao ny Antenimieram-pirenena fanao isan-taona faha-50 any Azia ary voafidy ho filoham-pirenena Andrew J Wood 2021-2023.
Talohan'ny fifidianana, Wood, izay heverina ho iray amin'ireo Skålleagues hita maso indrindra any amin'ny faritra, dia ny filoha lefitra Skål Asia (atsimo atsinanana).
Mpikambana Skål nandritra ny 29 taona no voafidy voalohany tao amin'ny filankevi-pitantanan'i Azia tamin'ny taona 2005. Wood, izay tokony hamita ny fe-potoana faharoa naha Filohan'ny klioba tranainy indrindra ao Bangkok - Bangkok, dia hampita an'i James Thurlby, filoha voafidy vaovao ao Bangkok.
Skål Asia dia manana mpikambana 2529 ao amin'ny Clubs 39, 28 tafangona ao amin'ny komitim-pirenena 5, ary klioba 11 miasa, ny Skål Asian Area (SAA) no faritra maro karazana indrindra amin'ny tontolon'i Skål. Ny faritra Aziatika dia miainga avy any Guam any amin'ny Ranomasimbe Pasifika mihoatra ny 10,000 km mankany Maorisy any amin'ny Ranomasimbe Indianina miaraka amin'ireo klioba any amin'ny firenena mahavariana 15 eo anelanelany. Ny faritra aziatika dia mitentina eo amin'ny roapolo isanjaton'ny mpikamban'ny Skål International manerantany.
“Ho an'ireo Skalleagues any Azia rehetra dia milaza aho fa toy ny filoham-pirenena maro talohako dia nanetry tena ahy ny asa teo alohanay, mankasitraka ny fahatokisana nomenareo.
"Tsaroako mandrakizay ireo firenena 15 izay tompoinay ambanin'ny Skål Asia sy ny ilana hiara-hiasa mba hanorina fatoram-pirahalahiana mafy amin'ny fototra mafy orina", hoy ny filoha vao voafidy, Wood.
"Skålleagues na aiza na aiza dia nijanona ho mahatoky amin'ny filamatra nataon'ny razamben'ny fahasambarana sy ny finamanana. Izany no izy ary tsy maintsy ho toy izany koa amin'ny taranja Skålleagues vaovao.
“Ny fananganana tetezana, fiaraha-miory ary fangorahana no hataoko loha laharana. Aorian'ilay areti-mifindra, rehefa tonga ny fotoana dia mila mitsangana isika, mivoaka ary manokatra ny tanantsika ary avelao hirehitra indray eo amin'ny fiainantsika ilay hazavana, "hoy ny filoha Wood.
Namporisika ireo mpikambana ao aminy koa i Wood mba hibanjina ny ho avy miaraka amina fanantenana vaovao, “Mety ho malemy be ny toekarentsika vokatry ny sisintany mihidy. Tsy misy olona afaka manao ambanin-javatra ny fahavoazana manerantany amin'ny indostria misy antsika. Nahazo fotoana tsy fahita firy anefa izahay hanindry ny bokotra famerenana, hanafoanana ireo lesoka taloha ary hanamboatra azy ireo ho marina.
Nanampy izy hoe, ”Tontolo vaovao iray momba ny dia sy fizahan-tany no miandry. Tontolo vaovao iray izay maniry hivezivezy, milamina kokoa, maharitra kokoa ary ho an'i Skål Asia dia azo antoka fa lehibe kokoa sy tia namana ary manantena bebe kokoa. ”
Mpamoaka eTN Juergen Steinmetz, izay sady filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany Hoy izy: “Fantatro nandritra ny taona maro i Andrew. Amin'ny maha GM trano fandraisam-bahiny Bangkok lehibe azy dia mpanjifa tsara izy eTurboNews.
“Taorian'ny fisotroan-drononoany dia nanjary mpandray anjara matetika tamin'ny famoahana antsika izy. Niditra tao amin'ny World Tourism Network (WTN) koa izy amin'ny maha mpikambana azy. Amin'ny maha-mpikambana ahy ao amin'ny SKAL dia resy lahatra aho fa ny SKAL Asia dia nandray fanapahan-kevitra tsara tamin'ny fifidianana izay tena mpitondra, mpanao ary olona manana fahitana.
“Hanokatra fotoana vaovao eo amin'ny SKAL Asia sy ny World Tour Network ny fitarihany. Andrew, arahaba soa! ”
Tsy misy kaongresy eto amin'ny tontolon'i Skål hatramin'ny niandohan'ny areti-mandringana 2 taona lasa izay, nilaza i Wood fa faly izy fa efa mandroso tsara ny drafitra ho an'ny Kongresin'ny faritra Azia Skål amin'ny volana Jona 2022 rehefa hampiantrano ny Kongresin'ny faritra Azia #RediscoverThailand Aziatika i Thailand. izay antenaina hisarika solontena 300 mandritra ny kaonferansa 4 andro (3 alina).
Ny filoha Skål Asia dia namarana tamin'ny filazany hoe: "Ny fanamby atrehantsika ankehitriny amin'ny tontolo vaovao izay mandeha rahampitso, dia tena izy. Matotra izy ireo ary maro izy ireo. Tsy mihambo aho fa ho mora na hohafainganina haingana, fa hihaona izy ireo. Tonga ny ampitso. ”